Nhau - Anti Virus Mask
Munguva yedenda, kuitira kuchengetedza hutano hwedu, isu tinofanirwa kupfeka masiki kana tichienda kunze. Saka, tinofanirwa kusarudza sei mamask kudzivirira hutachiona?
Iyo maski yekotoni inovimba neyakagadzika yemachira ekotoni kuti iite basa rekudzivirira uye kusefa Inogona chete kuvharira zvidimbu zvehukuru hwebvudzi nekudziya, asi haigone kuvharira zvidimbu zvakanaka nemavhairasi.
Masiki anoraswa anonyanya kugadzirwa nemachira asina kurukwa, ayo anongoshandiswa munzvimbo dzakajairika dzekurapa. Iyo yekusefa mhedzisiro yakati simbei zvishoma pane iya yedonje jira. Inogona kudzivirira guruva, mukume, zvidimbu zvakakura uye nezvimwe zvinobhururuka zvinobhururuka, nezvimwe.
Masiki ekuvhiya ekurapa anogona kudzivirira kupararira kwemadonhwe nemhedzisiro yekuvhara mvura, kunyorova kunyorova, uye kusefa. Iyo yekuvharira mhedzisiro iri nani pane iyo dziviriro yekudzivirirwa kwemasikisi anoraswa.
Unyanzvi hwekudzivirira masiki hunogona kusefa tudonhwe tudiki, iyo yekusefa mhedzisiro yakanaka neakanaka kumeso kukodzera maitiro, senge N95 mask.Zvino, ndiyo inoshanda kwazvo hutachiona hwekudzivirira turusi parizvino.
Parizvino, takatarisana nehutachiona hutachiona, isu tinofanirwa kusarudza chifukidzo nemazvo kuti chidzivirire zviri nani Tinofanirwa kupfeka chifukidziro patinobuda.
Mune zvisina kukodzera zviitiko, isu tinofanirwa kubuda zvishoma, izvo kwete chete zvinodzivirira hutano hwedu, asi zvakare zvinoderedza huwandu hwevanoshanyira hama neshamwari.
Kunyatsoshandisa masiki uye kudzikisira kubuda kunoita kuti nzanga yedu iwirirane.